Maleeshiyo beeleed oo gabar afar sano jir ahayd aano qabiil ugu dilay deegaanka Ceeljaale ee duleedka Magaalada Marka.. - iftineducation.com
Maleeshiyo beeleed oo gabar afar sano jir ahayd aano qabiil ugu dilay deegaanka Ceeljaale ee duleedka Magaalada Marka..
iftineducation.com – Wararka inaga soo gaaraaya Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyo beeleed ay gelinkii dambe Khamiistii shalay afar afar sano jir ahayd ku dileen deegaanka Ceeljaale ee duleedka Magaalada Marka.
Maleeshiyadan, ayaa waxay gabadhaasi dileen xilli ay xoog ku galeen hoygooda oo ku yaala deegaankaasi, isla-markaana ay la joogtay hooyadeed.
Maleeshiyadaasi, ayaa la xaqiijiyay inaanay dilin hooyadii qoyska, sababo ku aadan iyadoo sida la sheegay ay hal beel ka soo wada jeedeen, isla-markaana ay doonayeen oo keliya gabadhii ay dhashay, oo ka soo jeeda beel kale, oo uu khilaaf kala dhaxeeyo.
Dilka gabadhan yar, ayaa waxaa lagu sheegay mid aargudasho u ah toddobo qof oo habeenkii Talaadada lagu dilay tuulada Dudumo/Siinaay, oo ka tirsan deegaanka Shalambood ee duleedka Magaalada Marka.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, ayaa waxaa Gobolka Shabellaha Hoose ku soo xoogeystay dhiilada u dhaxeysa laba ka mid ah beelaha wada degga Gobolkaasi.
Dowladda Somaliya, ayaa waxaa lagu eedeeyay inay iska indho tireyso dhibaatada ka dhalatay xiisadda u dhaxeysa labadaasi beelood.
Daawo Sawirada:- ISIS oo damacsan weerarida Xeebaha Italy, Spain iyo Faransiiska